စကစက ခံတပ်တွေကို အပီအပြင်ဆောက်နေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း | D Daily News
Home Local News စကစက ခံတပ်တွေကို အပီအပြင်ဆောက်နေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း
စကစက ခံတပ်တွေကို အပီအပြင်ဆောက်နေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း
သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိပါဘူးနော် တဖက်ရန်သူကို အထင်မသေးပါနဲ့…
စကစက ခံတပ်တွေကို အပီအပြင်ဆောက်နေတာ ရယ်စရာမဟုတ်…ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်အတွက် ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားခြင်းမရှိတာဟာသတိလက်လွတ်ဖြစ်နေသလိုပါ….
သိပ်မကြာခင် မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကမြို့ထဲကိုရောက်လာတော့မှာ…ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ ???
ဗုံ းခိုကျင်း တူးပြီးပြီလား ???ဆေးဝါးနဲ့ ရိက္ခာ စုဆောင်းထားပြီလား..???ဘယ်ကိုပြေးရမလဲ..???ဘယ်မှာ ပုန်းခိုရမလဲ နေရာရှာထားပြီးပြီလား..???ဟိုက ခံတပ်ကို မဏ္ဍပ်လိုဆောက်နေတယ်ဆိုတာအပီအပြင်ပြန်ချမယ့် သဘောပါ…ဒါကို အကာကွယ်မရှာရသေးတဲ့လူတွေကရယ်ပွဲဖွဲ့နေကြတယ်
အန္တရာယ်ကို မြင်ကြပါ… ကိုယ့်ရှေ့မှာ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အတွေ့အကြုံမလိုဘူးလိုင်းပေါ်မှာတင် အတိုင်းသားမြင်နေရတဲ့ဟာ အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ ဟာသလုပ်မပစ်ပါနဲ့ အငိုက်မိတဲ့အချိန် ခံလိုက်ရရင်
ဗုံးးဆိုလဲ ကျဲချမယ့်ကောင်တွေ လ က်န က်ကြီးနဲ့လဲ ထု မယ့်ကောင်တွေပစ္စည်းလဲ လုမယ့်ကောင်တွေ မု ဒိ န်ါ းလဲ ကျင့်တဲ့ကောင်တွေ
အစစအရာရာ သတိထားကြပါ… ကိုယ့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ အမြဲ ဂရုစိုက်ကြည့်ပါ…
သောကတွေဟာ ဟာသလုပ်ပြီးမျှောချလို့မရတဲ့ ဝေဒနာပါ…ရန်သူကို ဘယ်တော့မှ အထင်မသေးလေနဲ့..
စာရော ပုံရော မူရင်းတင်သူကို
သတိဆိုတာ ပိုတယ္မရွိပါဘူးေနာ္ တဖက္ရန္သူကို အထင္မေသးပါနဲ႔…
စကစက ခံတပ္ေတြကို အပီအျပင္ေဆာက္ေနတာ ရယ္စရာမဟုတ္…ကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္အတြက္ ဘာမွႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားျခင္းမရွိတာဟာသတိလက္လြတ္ျဖစ္ေနသလိုပါ….
သိပ္မၾကာခင္ ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲေတြကၿမိဳ႕ထဲကိုေရာက္လာေတာ့မွာ…ဘာေတြျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလဲ ???
ဗုံ းခိုက်င္း တူးၿပီးၿပီလား ???ေဆးဝါးနဲ႔ ရိကၡာ စုေဆာင္းထားၿပီလား..???ဘယ္ကိုေျပးရမလဲ..???ဘယ္မွာ ပုန္းခိုရမလဲ ေနရာရွာထားၿပီးၿပီလား..???ဟိုက ခံတပ္ကို မ႑ပ္လိုေဆာက္ေနတယ္ဆိုတာအပီအျပင္ျပန္ခ်မယ့္ သေဘာပါ…ဒါကို အကာကြယ္မရွာရေသးတဲ့လူေတြကရယ္ပြဲဖြဲ႕ေနၾကတယ္
အႏၲရာယ္ကို ျမင္ၾကပါ… ကိုယ့္ေရွ႕မွာ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ
လိုင္းေပၚမွာတင္ အတိုင္းသားျမင္ေနရတဲ့ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟာသလုပ္မပစ္ပါနဲ႔ အငိုက္မိတဲ့အခ်ိန္ ခံလိုက္ရရင္
ဗုံးးဆိုလဲ က်ဲခ်မယ့္ေကာင္ေတြ လ က္န က္ႀကီးနဲ႔လဲ ထု မယ့္ေကာင္ေတြပစၥည္းလဲ လုမယ့္ေကာင္ေတြ မု ဒိ န္ါ းလဲ က်င့္တဲ့ေကာင္ေတြ
အစစအရာရာ သတိထားၾကပါ… ကိုယ့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘယ္သူေတြဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာ အၿမဲ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ပါ…
ေသာကေတြဟာ ဟာသလုပ္ၿပီးေမွ်ာခ်လို႔မရတဲ့ ေဝဒနာပါ…
ရန္သူကို ဘယ္ေတာ့မွ အထင္မေသးေလနဲ႔..
စာေရာ ပုံေရာ မူရင္းတင္သူကို
Previous articleဟုမ္မလင်းမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို စစ်ကောင်စီက လူမိုက်ဂိုဏ်းပုံစံနဲ့
Next articleအသုံးမပြုဘဲ ပစ်ထားတဲ့ Shopping Mall ကြီးထဲမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ငါးတွေ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့(ရုပ်သံ)